Kaddib dhaawaca Clement Lenglet, Macallinka Kooxda Barcelona ee Ronald Koeman oo aan haysan daafac dhexe – Gool FM
Kaddib dhaawaca Clement Lenglet, Macallinka Kooxda Barcelona ee Ronald Koeman oo aan haysan daafac dhexe
Haaruun November 30, 2020
(Barcelona) 30 Nof 2020. Kooxda Barcelona ayaa 4-0 kaga adkaatay Osasuna Axaddii waxaana ay ku dabaal-degeen guul weyn, laakiin taas bedelkeeda Blaugrana ayaa weysay daafaceeda Clement Lenglet, kaasoo dhaawac ku baxay qeybtii labaad ee ciyaarta.
Daafaca reer France ayaa ka dhaawacmay canqowga waana dhibaato kale oo soo food saartay Tababare Ronald Koeman, kaasoo sidoo kale aan haatan haysan daafacyadiisa dhexe ee Gerard Pique, Ronald Araujo iyo Samuel Umtiti, kuwaasoo dhammaantood dhaawacan.
Taasi waxa ay la micno tahay in afarta daafac dhexe ee kooxda koowaad ay ka maqan yihiin shaxda Barcelona, isla markaana ay ku midoobeen qolka daweynta kooxda ka dhisan Gobolka Catalonia.
Ciyaaryahanka Barcelona B ee Oscar Mingueza ayaa Axaddii ka garab ciyaarayay Lenglet booska daafaca dhexe, 21-sano jirkaan wuxuu hubaal heli doonaa daqiiqado badan oo dheeri ah oo uu ku ciyaaro mustaqbalka dhow.
Frenkie de Jong ayaa dib ugu soo laabtay daafaca dhexe daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaartii Osasuna, wuxuuna xulasho u noqon karaa Tababare Koeman, maadaama uu halkaas ka ciyaaray wax ka badan hal jeer, Junior Firpo waa dooq kale oo ka ciyaari kara halkaas.
Chelsea oo bartilaameedsanaysa daafac ka tirsan Kooxda RB Leipzig... (Yaa kula tartamaya saxiixiisa?)
Edinson Cavani oo saddex kulan la ganaaxi karo kaddib guushii soo laabashada lahayd ee uu shalay ku hoggaamiyey Kooxdiisa Manchester United